DAAWO SAWIRRO: Kulan looga hadlayo Maalinta Nabadda Aduunka oo lagu qabtay Garoowe – Puntlandtimes
DAAWO SAWIRRO: Kulan looga hadlayo Maalinta Nabadda Aduunka oo lagu qabtay Garoowe
GAROOWE(P-TIMES) – Kulankan oo ahaa mid looga hadlayey Nabadda, Qimaha leedahay iyo sidii ay bulshada qeyb uga qaadan lahaayeen Sugida Amniga ayaa lagu soo gaba-gabeeyey magaalada Garoowe, wuxuuna qeyb ka ahaa Xuska Maalinta Nabadda Aduunka oo 21 September laga xusay dunida oo dhan.
Masuuliyiinta Wasaaradda Amniga iyo DDRTa ee dawladda Puntland, Madax ka socotay Hay’addaha Qaramada Midowbay ee la shaqeeya Wasaaradda , Madaxda Booliska iyo Dhalintarro ka yimid gobalada Puntland ayaa madashan goob-joog ka ahayd.
Koox-koox ay isku qeybiyeen dhalinyaradda, waxay ka doodeen sababaha keena dagaalada dhaca iyo sidii xal looga gaari lahaa colaadaha qaarkood, gaar ahaana kuwa bulshada dhexdeeda ka dhaca ee kusaleysan Kheyraadka.
Agaasimaha Waaxda Dibu heshiisiinta Nabadeynta iyo Xariirka gobalada ee Wasaaradda Amniga Cabdirisaaq Maxamed Ismaaciil ayaa sheegay in kulankan uu qeyb ka yahay kulamo ay sameyso Wasaaradda Amnigu, wuxuuna sheegay in ay iska kaashanayaan Hay’addaha UNDP, UNCAP iyo UNSOM.
Agaasimaha guud ee wasaarada amniga iyo hubka dhigista Dawladda Puntland Saleebaan Xaaji Cabdi ayaa sheegay in ay dawladda ka go`an ka tahay ka shaqeynta Nabadda, isagoo sheegay in laga hadlo Arrimaha Maalintan ay qiimo weyn u leedahay dawladda.
Madax ka socotay Hay’addaha caalamiga ah ee gacanta ka geystay xuska Maalinta Nabadda Aduunka oo madasha ka hadlay ayaa bogaadiyey talaabada maalintan, ayna tahay arrin muhiim ah oo ay tahay in dadka oo dhan ay qeyb ka noqdaan.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Amniga ee dawladda Puntland Cabdiweli Maxamuud Yuusuf ayaa soo xiray shirkan, waxaana uu sheegay in ay ka go’an tahay dawladda Puntland wada shaqeyn buuxda oo dhexmarta Shacabka Iyo Dawladda, si amniga loo sugo.
ar ciise riyoole reer baadiye futo dhuxulow fuulxumo badnaa? oraahdii intii madax madow iyo majeerteen kuwaan bey ka timid walee waa majeerteen sheegad aan daarood dhalad aheyn, waxaa ugu qosolka badan balaayadaas sidaas u foolxun baa reer Sheekh Isaxaaq usku dhadhajiya amaba sheegta kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk